Izikolo ze-NHL ngama-GB Labs - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB Show LIVE
Ikhaya » Izindaba » Izikolo ze-NHL ngama Labs we-GB
Izikolo ze-NHL ngama Labs we-GB
I-Aldermaston, UK, 12 Agasti 2019 -I-Labs ye-GB, abasunguli bezisombululo zokugcina imithombo yezokuxhumana ezinamandla nezikhaliphile zezimboni zezindaba nezokuzijabulisa, isimemezele ukuthi iNational Hockey League yaseNorth America (iNHL) ithenge uhlelo lwe-GB Labs 'MiniSPACE SSD 1RU.
Omunye wabashayeli bokuhamba kwe-NHL ku-GB Labs kwakuyisidingo seligi sokugcina ukusebenza okuphezulu okuhambisana nokuhamba kalula. Uhlelo lwayo lokugcina olukhona lukhombisile ukungathembeki, luphethwe ukungasebenzi kahle nokuthwala okunganele.
Isikhulu esiphezulu se-Akhawunti ye-GB Labs North American uJohn Alaimo uthe, "Into ebalulekile yalokho okufake isikhalazo kwi-NHL nge-SPACE SSD amandla ayo ukuhlinzeka ngendlela efanayo kanye nokuxhumeka okuqondile kwabahleli abaningi, okuvula amathuba amaningi okulethwa kwamapulatifomu amaningi kokuqukethwe okunezitayela. Futhi, ngaphezulu kwesivinini sohla lwe-SPACE SSD, ihlinzeka ukusebenza, ukuthwala nokuzimela, kanye nokuthembela obekulokhu bekungekho ngaphambili. "
Ngemuva kwezingxoxo, iligi yakhethe i-GB Labs 'MiniSPACE SSD 1RU ukusizakala ngesisindo sayo sokukhanya, ukuthwala okuphezulu, i-SSD esheshayo, kanye nokwethenjwa nokusebenza kwe-CS Labs eyadalulwa i-CORE.4 OS.
Uhlelo lokugcina lwe-NHL's MiniSPACE SSD 1RU lusekela ngokuqondile abahleli abayisishiyagalombili; i-data wrangler exhunywe yi-10GbE yokusebenza ephezulu ukuze yamukele i-1000MB / s I / O; kanye ne-24-port switch yezimo lapho kudingeka abahleli abengeziwe.
Uhlelo lweLebs Labs lwenza iqembu lokukhiqiza le-NHL lihambise kalula isistimu yalo yokubeka futhi lihlele ngokuthembekile ngokuphelele endaweni lapho kudingeka khona.
Mayelana nama-Lab Lab
AmaLebhu we-GB ungumholi wembulunga yonke kwisitoreji semidiya esihlakaniphile, kwakhela indawo yokugcina eyabiwe yomkhakha wezindaba. Ngokuqonda izinkinga zemboni yangempela yomhlaba, ubuchwepheshe obukhethekile benzelwe i-software eyingqayizivele ye- "CORE" egcwalisa izidingo zabasebenzisi. Akunandaba ukuthi ukukhiqizwa kuhlungwa kuphi, ukuthi iqembu likhulu kangakanani noma usayizi wesabelomali, ama-GB Labs anganikeza isisombululo sokuqinisekisa ukuthi isikhathi sokugcina siyahlangabezana futhi kuyo yonke inqubo, okuqukethwe kuphephile.
Thola okuningi ku: www.gblabs.com noma shayela: EUROPE (+ 44) (0) 118 455 5000 noma i-USA (+ 1) 661 493 8480.
Uxhumano lwenkampani ye-GB Lab Lab:
Ifoni: + 44 (0) 118 455 5000
I-GB Labs Media Contact:
Ifoni: + 44 (0) 7899 977 222
Memezela i-Aurora Health Campaign / I-Colonie Ukusakazwa-Abezindaba Komphakathi Ukusakaza-SocialMedia I-CORE.4 OS Abahleli I-Lab Lab INGEST Izixazululo zokugcina zesitoreji se-Media I-MiniSPACE SSD 1RU NHL INorth America National Hockey League ISIKHUMBUZO I-SSD Ama-spears nama-Arrows SSD Storage I-Ultra HD Forum	2019-08-12
Ngaphambilini: Uzakwethu weTechch ne-MTI Teleport ukwelula ukufinyelela komhlaba wonke ukulethwa kokuqukethwe okubukhoma
Olandelayo: Umkhiqizi nomculi uPaul Gala Uphakamisa Ikhwalithi Yezimphumela ze-PMCXXUMX Monitors